WunYan – Page 326
ဒို့လဲ အစ္စရေးထံမှ နည်းယူပြီး အိန္ဒိယလို လုပ်သင့်ပြီ
Posted on September 18, 2017 by whuk-46651
ဒို့လဲ အစ္စရေးထံမှ နည်းယူပြီး အိန္ဒိယလို လုပ်သင့်ပြီ အကြမ်းဖက်ရန်ကာကွယ်ရန် ။ India Border Security Force(BSF) အိန္ဒိယ( BSF)ကပါကစ္စတန်ဘက်မှ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဝင်လာသည့်အတွက် အိန္ဒိယ နိုင်ငံတွင်းထပ်မဝင်နိုင်အောင် အစ္စရေး၏ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ ယူပြီး Automatic guns,radar,ရေအောက် sensors နှင့် မြေအောက် Sensors ,အဆင့်မြင့် electronic ထောက်လှမ်းရေး ကရိယာများ များတပ်ဆင်ပြီး…
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာသာတရား တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးလို့…လက်ဘနွန်နိုင်ငံ စာရေးဆရာမ ဘာကြောင့် ပြောရတာလဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာသာတရား တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးလို့ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ စာရေးဆရာမက ပြောခဲ့ပါတယ်.. သူ ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲ? (အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့စာလေးမို့ ဆုံးအောင်ဖတ်စေချင်ပါတယ်) “ငါဘုရားရဲ့ တရားတွေကို တွေးကြံနိုင်စွမ်းရှိသူတွေပဲ သိနိုင်မယ်” — ဗုဒ္ဓ ကျမက ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းလှတယ်မဟုတ်၊ ဗုဒ္ဓတရားကိုပဲ ကျင့်ကြံတယ်လို့ ပြောမိတိုင်း မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ပြန်လာလေ့ရှိတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓတရားကို ဘာသာ တရပ်လို့ အများက သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ကျမအတွက်တော့…
အကြမ်းဖက်တွေ ခြေကုပ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ စစ်တပ်အကြီးအကဲ ပြော
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံထဲ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ သိန်းနဲ့ချီ ထွက်ပြေးလာကြရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ပြဿနာဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ်မှာပဲ အဓိက တာဝန် ရှိတယ် ဆိုပြီး မြန်မာ စစ်တပ် အကြီးအကဲက ပြစ်တင် လိုက်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု ဘယ်တုန်းကမှ မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောတဲ့အပြင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ…
ရုံးပတေသီးက သွေးအတွင်း ကိုလက်စထရော ဓာတ်တွေကိုကျဆင်းစေပြီး၊ အမြင်အာရုံကို ကောင်းစေကာ၊ အစာခြေစနစ်ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် အသားအရေကို လှပစေပြီး ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးကာ အရိုးအဆစ်တွေကိုလည်း သန်မာစေပါတယ်။ နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးကာ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းပြီး သွေးတိုးတာကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ရုံးပတေသီးက ပန်းပွင့်တဲ့ အပင်အမျိုးအစားထဲက တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့က နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဟင်းလျာတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းချက်ပြုတ်ကြပါတယ်။ သိပ္ပံနာမည်က Abelmoschus Esculentus ဖြစ်ပြီး တချို့…
အုန်းသီးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်နှင့် အသုံးဝင်ပုံများ
အုန်းသီးဟာ လူတွေ အတွက် ကောင်းမွန် ထူးခြားတဲ့ အစာ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်.။ အထူး ခြားဆုံးက လူ့အသက်ကိုတောင် ကယ်တင် နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ အသီး ဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းသီးဟာ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို တည်ငြိမ် စေနိုင်စွမ်း ရှိခြင်း၊ ကိုလက်စရောကို လျော့ချ ပေးနိုင်စွမ်း ရှိခြင်း၊ ရေဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်း ပေးခြင်းနဲ့ အရေးပေါ် သွေးရေကြည် သွင်းဖို့…
ကျွန်တော် သတိထားမိတဲ့ ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ
ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက်မိတယ် ။ အသင့်အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံလှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေးတစ်ချို့ဝင်လာပြီး ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ကျွန်တော့ဟာကျွန်တော် တွေးနေမိတယ် … … မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာမ​ဆောင်ခင်​က မိဘ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု့အောက်မှာ နေပြီကြီးပြင်းလာခဲ့တယ် ။ အခုကြ တစ်ချက်ထဲ…
၇ ရက်သားသမီးများအတွက် ၁၆.၉.၂၀၁၇ မှ ၂၃.၉.၂၀၁၇ အထိ (၁) ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
၇ ရက်သားသမီးများအတွက် ၁၆.၉.၂၀၁၇ မှ ၂၃.၉.၂၀၁၇ အထိ (၁) ပတ်စာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဘာမှန်းမသိပဲ အလုပ်တွေရှုပ်နေမယ်။ တအားပင်ပန်းမယ် ။စိတ်မောလူမောတွေဖြစ်မယ်။အလုပ်ပိပြီး ကျန်းမာရေးညံသွားတတ်တယ်။စိတ်တိုင်းမကျစရာတွေများနေမယ်။တတ်နိုင်သမျှ စိတ်ရှည်ရှည် ခေါင်းခေါင်းအေးအေးနဲ့အလုပ်တွေကို သက်တောင့်သက်သာလေး လုပ်သွားသင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် ။အလုပ်ထွက်ချင်၊ပြောင်းချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိရင် ခဏလေးစောင့်သင့်ပါတယ်။ နေရာကိစ၊အိမ်ကိစများ၊တို့လို့တန်းလန်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။မိတ်ကောင်း၊ ဆရာကောင်းတွေရဲ့ အကူအညီကောင်းတွေပေါ်လာမယ် ။ နိုင်ငံခြားနဲပက်သက်လို့ အဆက်အသွယ်အခွင့်အရေးကောင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ မြေ၊အမွေ၊ဖုန်း၊အထည်၊ထီး၊ဖိနပ်၊ဓါတ်ပုံ၊လျှပ်စစ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ အထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ် ။ခြေထောက်၊ခါး၊အစာအိမ်၊ကျန်းမာရေးသတိပြုသင့်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ရှင်များ၊ချစ်သူရည်းစားများအတွက်တော့ အဆင်မပြေမှုတွေများနေပါလ်ိမ့်မယ်…
သွေးတိုးတဲ့အချိန် မြန်မြန်ကျအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အလွယ်နည်းလမ်းများ
Posted on September 17, 2017 by whuk-46651
ရုတ်တရက် သွေးတိုးနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ခေါင်းမူးခြင်း ၊မျက်နှာအစ်မို့ခြင်း ၊ ဇက်ကြောထိုးခြင်း များ ခံစားရပါတယ် ။ သွေးပေါင်ချိန် အများကြီးတက်နေတာဟာ အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အထိကို အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒီလို မိမိကိုယ်ကို သွေးတိုးသည်ဟု သိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ လိုပါတယ် ။ အဲ့ဒိအတွက် ဆေးသောက်စရာမလိုဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်​မှာရှိတဲ့ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ၁။ သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီး…
အအိုတွေ အပျိူလေးလို ပြန်ဖြစ်ဖို့ နည်းလမ်း
မိန်းမကိုယ် ပြန်လည်ကျဉ်းစေဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ မသုံးချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေ ရှိပါတယ်။ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ကြောက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဈေးကြီးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆေးတွေ မသုံဘူးဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်လို့ရပြီး စိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ ကြွက်သားတွေ လျော့ရဲတာကို ပြန်လည်တင်းရင်စေပြီး ပြန်လည်ကျဉ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဆီးဖြူသီးကိုတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဆီးဖြူသီးဟာ မိန်းမကိုယ်အတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူ…
သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်တစ်ယောက်ကတော့ ခုရက်ပိုင်း ဓာတ်ပုံအလန်းစားများတင်ပြီး ပရိတ်သတ် စိတ်ဝင်စားမှု ပိုရလာတယ် လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သြဂုတ်လတွင်းက သူမရဲ့ တင်အတု သတင်းပလင်းတွေ ဖေ့စ်ဘွက်မှာ ပြန့်ကျဲနေခဲ့ပေမယ့် ပြတ်ပြတ်သားသား အမှန်တရားကို တစ်ချက်တည်းနဲ့ ချပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တင်အတု တပ်ထားသလား ဆိုတဲ့ ကောလာဟလတွေ နဲ့ သူမကို အမျိုးမျိုး လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူမကတော့ နောက်ရက်မှာ “စကားတွေ…
Previous 1 … 325 326 327 … 374 Next